I-Sun City Golf Break
Iphakethe lakhe leholidi laseSun City le-Sun City eliyizinsuku ezintathu lizokusingatha endaweni yokuhlala ekhangayo yaseSun City Resort futhi ikubonise emifundweni emibili yegalofu eNingizimu Afrika.
Lolu suku lwe-Sun City Golf Break luyisikhathi sokuphunyuka okuphelele kwe-novice ne-golfers abanekhono. I-Sun City Resort ihlala emiqhudweni emibili yezemidlalo yegalofu eyayihlelwe yigoli legalofu, uGary Player. Lapha uzohamba nge-golf ye-Gary Player Country Club ne-Lost City Country Club.
Phakamisa izembatho zakho zokugqoka ukugqoka ukuze uthole ama-intanethi athile ngesikhathi sekhefu lakho le-Sun City igalofu.
Jabulela izindawo ezihloniphekile endaweni yokuhlala yakho yegalufu. Sebenzisa isikhathi sokuhlwa ukuhlola i-Sun City Resort. Khetha kusuka ezinhlobonhlobo zokudlela ukuze udle futhi uthathe ithuba emishini ye-slot kanye nemidlalo yethebula.
Usuku 2 : i-18 holes Lost City Country Club
Ngemva kokungena endaweni yakho yokuhlala e-Sun City Resort, freshen up bese uchitha ntambama yakho e-Lost City Country Club. Zama isandla sakho ku-72 ngegalofu.
Ngemuva kwelanga elikhiqizayo legalofu, ujabulele isiphuzo esiqabulayo kubha yeqembu lezwe. Ungakwazi ukuchitha ubusuku ngokuzilibazisa kwakho. Jabulela isidlo esimnandi kwenye yezindawo zokudlela zokudlela.
Hlola inhlanhla yakho emagcekeni kanye namatafula ngesikhathi sobusuku obungenakulibaleka ku-Sun City Casino eyaziwayo.
Indawo yokuqasha: Iyatholakala
Ukuqashwa kweqembu: Kuyatholakala
Uhambo lokuhamba: Ukuzivocavoca ukusika nokubeka oluhlaza
Ikhodi yokugqoka: Amakhodi avamile avamile ayasebenza futhi ama-spikes athambile kuphela
Usuku 2: i-18 holes Gary Player Country Club
Ukuphumula kweholidi lakho le-Sun City kuqhubeka ngemva kokudla kwasekuseni okunethezeka. Gqoka igaraji lakho lokugcoba ukuze ujabulele ntambama yakho eGary Player Country Club futhi usebenzise isandla sakho uphinde uthuthukise ukuguqula kwakho kule nkambiso yezemidlalo igalofu.
Umlingani wakho angakwazi ukuthola izindlela zokwelapha zokwelashwa e-Gary Player Country Club Club, ngenkathi uhlola inkambo yegalufu eyi-18 engama-hole. Yenza isidlo sakusihlwa esiphundu eklabhu yezwe bese uqhubeka nomsebenzi wakho we-golf ntambama.
Indawo yokuqasha: I-Gary Player Country Club iyinkambo yegalufu eqondile yokuhamba
Uhambo lokuhamba: Iyatholakala e-Lost City Course Course
Usuku 3: Okokugcina?
Vuka futhi ube nesidlo sasekuseni esinomsoco ngaphambi kokuhlola indawo yokuhlala yase Sun Sun Resort ukuze uqhubeke nezinhlelo zakho zokuhamba. Ngaphandle kwalokho, kungani ungahlali isikhathi eside futhi ukhethe elinye igalofu?
Ukulala okungu-2 ebusuku ekamelweni lamabili eSigodlweni saseLost City kuhlanganise nesidlo sasekuseni nsuku zonke (ukulungiswa kwamakamelo kuyatholakala)
izimbobo ezingu-18 e-Lost City Country Club ngesidlo sasemini ku-clubhouse
izimbobo ezingu-18 eGary Player Country Club kufaka phakathi kwasemini ku-clubhouse (isigamu)
Imali ye-Caddy, iklabhu, ukuqashwa kwenqola kanye nemisebenzi yokuzikhethela engacacisiwe
I-Fuel nezinye izinto ezengeziwe okufanele zixazululwe ngokuqondile